သစ်ကောင်းအိမ် ● နှစ်ချိုမြစ် …. မဟာတံတိုင်းကြီးနောက်ကွယ်က ပင်လယ် (မိုးမခ) မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၉ (၁) ကဗျာဆရာ (ကို) အိုအောင်က သူ့စာအုပ်သစ်အကြောင်း မိတ်ဆက်ရင်း ပင်လယ်နှင့် သူ ရေစက်မဆုံကြောင်း...
သစ်ကောင်းအိမ် ● နှစ်ကိုက်စာ …
သစ်ကောင်းအိမ် ● နှစ်ကိုက်စာ … (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၈ ရေပြင်ဖြစ်လျက် အတွန့်အခေါက်တွေချိုးပြီး မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအောက် အပြစ်ပေးခံထားရသော လှိုင်းတံပိုးများ တယောက်နှုတ်ခမ်းက စီးကျနေတဲ့သွေးကို တယောက်နှုတ်ခမ်းနဲ့ သုတ်ပေးနေတဲ့ကမ်းခြေ မနက်ဖြန်ရောက်တိုင်း တယောက်အသံ...
သစ်ကောင်းအိမ် ● ဆောင်း …
သစ်ကောင်းအိမ် ● ဆောင်း … (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ ခဲနေသောမှောင်ရိပ်များ လွင့်နေသောမိုးသားများ မီးလောင်နေသောပန်းခင်းများ လေ၌ ရေးကွင်းမိသော မင်းနှုတ်ခမ်းပုံစီးကရက်မီးခိုးများ အိပ်မွေ့ချထားတဲ့ ခြေင်္သေ့ ဘော့မာလီသီချင်း ဂျစ်ပစီတီးတဲ့ဂစ်တာ ခရမ်းပြာရောင်လေသာပြတင်း...
သစ်ကောင်းအိမ် ● မိသားစု (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၈ ဒီကမ္ဘာလောက် လှတဲ့ကမ္ဘာ …. ဘယ်ကမ္ဘာမှာမှ မရှိဘူး။
သစ်ကောင်းအိမ် ● အမြည်များ …
သစ်ကောင်းအိမ် ● အမြည်များ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၈ အနော်ရထာလမ်းမ … ဘုရင့်နောင်ညဈေး …. ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတား .. ဗန္ဓုလထီဆိုင် ..တဲ့ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လူမျိုးကမှ အညတြစစ်သည်တွေရဲ့နာမည်ကို...
သစ်ကောင်းအိမ် ● Oakland ….
သစ်ကောင်းအိမ် ● Oakland …. (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇ မြို့လည် ရုပ်ရှင်ရုံဟောင်းရဲ့မျက်နှာစာမှာ ထင်ထင်ရှားရှား… ….. စောက်ရူး …. ဂျော့ဒဗလျူဘုရှ် .. ထွက်သွား ….. တဲ့...
သစ်ကောင်းအိမ် ● ရေခဲဖုတ်ကောင် (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၈၊ ၂၀၁၆ ပိုးဖလံတွေ မီးထဲ အပျံသင်သလို ငါးမန်းတွေ သွေးညှနံ့နောက်လိုက်သလို နုံးတိုးငါးတွေ အေးရာအေးရာအေးကြောင်းရှာသလို အပျော်ကြီးပျော်နေတဲ့ အပျော်ကြီးထဲမှာ ပျော်သွားတဲ့အပျော်တွေကို ပြန်ရေ ဖြတ်ခဲ့တဲ့...
သစ်ကောင်းအိမ် – ကကြိုး
သစ်ကောင်းအိမ် – ကကြိုး (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၆ မှန်တချပ်ပေါ်မှာ ငါ့မျက်နှာနဲ့ ရုပ်ဖျက်ထားတဲ့လူတယောက်ပေါ့။ တစုံတရာကို အော်ဟစ်တိုင်တန်းလိုက်တိုင်း ငါ့လျှာထက်မှာ သူ့စကားလုံးတွေထွက်ကြလာနေကြ။ တစုံတရာကို ဖမ်းဆုပ်ချုပ်ကိုင်လိုက်တိုင်း ငါ့ပုခုံးသားတွေက သူ့လက်မောင်းတွေ ဆန့်တန်းရှည်ထွက်လာကြ...
သစ်ကောင်းအိမ် – အမှိုက်များ
သစ်ကောင်းအိမ် – အမှိုက်များ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅ သပိတ်တလုံးစွပ် ကောက်ရိုးကို နံရိုးလုပ်ပြီး ပြောင်စပ်စပ်မျက်နှာနဲ့ ငါရပ်နေတဲ့ လယ်ကွင်းထဲက အမှိုက်တွေကို လာကောက်ပေးပါ ငါ့ဦးခေါင်းကို ဖင်ခုထိုင်နေတဲ့ ဆံပင်တွေကို လာကောက်ပေးပါ...
သစ်ကောင်းအိမ် – ပိတောက်တွေဖွင့်မယ့်သော့ (၂)
သစ်ကောင်းအိမ် – ပိတောက်တွေဖွင့်မယ့်သော့ (၂) (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၅ (၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်းကရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ သစ်ကောင်းအိမ်ရဲ့ကဗျာကို မိုးမခ ပရိသတ်အတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေး လိုက်ပါတယ်) မုဆိုးမကြီး ခါးဝတ်ထမီ မြဲမြံတုန်း...
သစ်ကောင်းအိမ် – သိုက်တူးသမားတယောက်အကြောင်း ပြန်လည်ပြောပြချက်
သစ်ကောင်းအိမ် – သိုက်တူးသမားတယောက်အကြောင်း ပြန်လည်ပြောပြချက် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၅(၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း ရေးဖွဲ့ခဲ့ဟန်ရှိသည့် ကဗျာဆရာ သစ်ကောင်းအိမ်၏ ကဗျာကို မိုးမခပရိတ်သတ်အ တွက် ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်) ကြေးစားကလည်း...
သစ်ကောင်းအိမ် – သစ်ကောင်းအိမ်မှ … ကမာပုလဲဆီသို့ …
သစ်ကောင်းအိမ် – သစ်ကောင်းအိမ်မှ … ကမာပုလဲဆီသို့ … (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၅ (လေထန်လွန်းပြီး သစ်ရွက်တွေ ဒရောသောပါးကြွေနေတဲ့ မနက်ခင်းတခုမှာ အလုပ်ကနေ အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းကိုပေါက်ဆုံးပြီဆိုတဲ့…. ကိုမျိုးမြင့်ပို့ထားတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုတွေ့တော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထဲ...
သစ်ကောင်းအိမ် – ဒီတခါနက္ခတ်စုံရင်တော့ ပြန်ဆုံကြရအောင် . .ဒေလီယာ…
သစ်ကောင်းအိမ် – ဒီတခါနက္ခတ်စုံရင်တော့ ပြန်ဆုံကြရအောင် . .ဒေလီယာ… နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၅ ပြန်သောက်မိတဲ့စီးကရက်တွေကလည်း ငယ်ငယ်တုန်းက စီးကရက်တွေမဟုတ်တော့ဘူး ပြန်ထိုင်မိတဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေကလည်း ငယ်ငယ်တုန်းက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေမဟုတ်တော့ဘူး ပြန်နားထောင်မိတဲ့သီချင်းတွေကလည်း ငယ်ငယ်တုန်းက သီချင်းတွေမဟုတ်တော့ဘူး...